Qaabka adag ee taleefanka gacanta lagu soo celiyo - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>so>Qaabka adag ee taleefanka gacanta lagu soo celiyo
Qaabka adag ee taleefanka gacanta lagu soo celiyo
Tallaabada 1: Soo degso oo wado barnaamijka softiweerka ah ee 'Bplandatarecovery'. Ku guji batoonka bilaashka ah ee ku soo bixi bogga degsan bogga rasmiga ah ee Bplandatarecovery si aad u soo dejiso softiweerka. Bplandatarecovery waa nooc cagaaran oo softiweer ah, looma baahna in la rakibo, waxaad ku socodsiin kartaa softiweerka kadib goos gooska kadib markaad soo dejiso. Tallaabada 2: Xulo qeybta mobilada dirawallada qaabeysan, ka dibna riix batoonka "Soocelinta faylka". Talaabadani waa mid aad muhiim u ah.Waa inaad doorataa qeybta saxda ah ka hor inta aysan suurtagal ahayn raadinta xogta aad u baahan tahay. Tallaabada 3: Guji "Start" badhanka daaqadda faylka soo-kabashada si loogu oggolaado barnaamijku inuu bilaabo raadinta xogta lumay. Haddii booska la iska baarayo uu weyn yahay, iskaanka wuxuu qaadan doonaa waqti dheer, laakiin softiweerku wuxuu liis garayn doonaa xogta laga helay waqtiga dhabta ah markii la raadinayo xogta. Qaabkaan, hadii la ogaado inuu u baahan yahay Marka xogta la helo, waxaad ku dhamaan kartaa howsha iskaanka hore. Tallaabada afraad: dib u fiiriya faylka. Sahaminta feylasha waxay gacan ka geysan kartaa go'aaminta haddii xogta lumay ay dhaawacantay. Haddii xogta dib loo habeeyo ka dib markii la qaabeeyo kombiyuutarka Hard disk, xogta lumaysa waa la baabi'in karaa. Xaaladdaas, waxaa lagama maarmaan ah in si taxaddar leh loo eego xogta. Tallaabada shanaad: Nuqul kaararka faylasha. Nuqul xogaha la iskaaliyay u qeybi qaybaha kale si aad u dhammaystirto habka soo kabashada. Ogeysiis: Waa mabnuuc in lagu keydiyo wixii xog ah qeyb ahaan meesha xogtu luntay ilaa xogta si guul leh looga soo kabto. Dhibaatooyinka caamka ah ee la soo dejiyay xogta soo kabashada ee wadataha adag ee taleefanka
Q1, sida loo xukumo luminta wadista guurka adag ee mobilada. Macluumaadkaaga ma la daabacay? Hordhac faylka. Marka hore, haddii xogta luntay gabi ahaanba la sifeeyo, faylka laguma qori doono natiijooyinka iskaanka; haddii faylka qayb ahaan lagu qoro oo keliya, ka dib faylka ayaa ka soo muuqan doona natiijada iskaanka, laakiin waa la dhaawacmi doonaa marka aad fiiriso faylka. Bplandatarecovery wuxuu bixiyaa hawl qabad hormarineed oo firfircoon, kaasoo ka caawin kara adeegsadayaasha inay xukumaan haddii faylka uu waxyeelloobey. Muddo intee le'eg ka dib markii qaab diskga adag ee taleefanka gacanta laga soo kaban karo? Si adag uga hadlidda, soo kabashada xogta qaabku ma leh wax badan oo ku saabsan waqtiga luminta xogta. Ilaa iyo inta xogta aan la qorin ka dib markii xogta la waayo, oo disk-ga uusan jir ahaan dhaawacmin, markaa waa suurtogal in la soo celiyo xogta waqti kasta. Sababta aan uga fadhiyo sababta aan u helo xogta lumay? Marka la qaabeynayo ama kasoo kabanayo, mararka qaar xogta lama baari karo.Xaalado la wadaago ayaa ah sida soo socota:
Qalabka la iska ilaaliyo waa qalad : Kahor intaadan bilaabin skaanka, waa inaad doorataa qeybta ka mid ah meesha xogta lumay ay ku taal, si ay suurtagal u noqoto in la raadiyo xogta saxda ah. Faylasha si sax ah looma shaandheeyn: waxaa inta badan jira xog badan natiijooyinka iskaanka, mararka qaarna way adagtahay in la kala sooco xogta loo baahan yahay, gaar ahaan marka qaab dhismeedka asalka ah uu waxyeelloobey. Markaad raadineysid xogta natiijooyinka skaanka, waxaad si dhaqso leh uheli kartaa faylasha aad ugubaahantahay adoo kaashanaya shaandhaynta howlaha iyo horudhaca feylasha. Habka raadinta ayaa khaldan: habka dib u soo kabashada xogta ee loo adeegsado xaaladaha luminta xogta kaladuwan sidoo kale waa kala duwan tahay, waxaad isku dayi kartaa inaad bedesho habka iskaanka ama raadso caawimaad farsamo. Macluumaadkii lumay dib ayaa loo sifeeyay: xogta dib loo soo celiyay si caadi ah looma soo ceshan karo.Haddii xogtii luntay gabi ahaanba dib loo sifeeyay, markaa xogta looma baari karo. Q4. Waa maxay sababta xogta xogaha soo kabashada aan la furi karin? Waxaa jira labo sababood oo ugu waaweyn oo sababta macluumaadka dib loo soo saari waayey aan la furi karin: mid waa in faylka lumay la dhaawacay, taas oo inta badan sabab u ah dib-u-qorista ka dib markii xogtu lumaan, sida keydinta faylka, iwm. Habka soo kabashada waa qalad. Xaaladaha qaarkood ee luminta xogta qalafsan, qaababka caadiga ah ee soo kabashada ayaa laga yaabaa inaysan awood u lahayn inay si sax ah u soo ceshadaan xogta. Haddii ay dhacdo in xogta dib loo helo aan la furi karin, waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaha farsamada Bplandatarecovery si aad uga caawiso falanqaynta sababta gaarka ah iyo xallinta. Kor ku xusan waa geedi socodka guud ee qaabka iyo dib u soo celinta diskiga adag, iyo macluumaadka lumay ee qaabaynta diskiga adag ayaa si fudud looga soo kaban karaa dhinacyada kor ku xusan. Intaa waxaa dheer, tababbarkaani wuxuu sidoo kale ku habboon yahay qaabaynta soo kabashada diskka kombiyuutarka, diskiga U, kaarka SD, diskka kombiyuutarka iyo aaladaha kale. Hadaad wax su'aalo ah qabtid ama aad ubaahantahay caawinaad qaabka dib u soo kabashada, xogta diskiga guurka adag, iwm., Fadlan laxiriir adeega macaamiisha khadka tooska ah waqtiga.
PreQalabka dib u soo kabashada faylka ee khaldan
NextWadaha adag ee mobilada lama furi karo